दाँत पहेँलो भयो ? चमचमाउँदो सेतो दाँत बनाउने यस्ता छन् घरेलु उपायहरु ! | सुदुरपश्चिम खबर
दाँत पहेँलो भयो ? चमचमाउँदो सेतो दाँत बनाउने यस्ता छन् घरेलु उपायहरु !
जिन्दगीमा धेरै कारणले गर्दा दाँतमा समस्या आइदिन्छन् । कफी, निकोटिन, चकलेट लगायतका कुरा सेवन गर्दा दाँत बिग्रन्छन् । तर हामीसँग भएको सरल र प्राकृतिक उपायले तपाईँलाई दाँत सेतो बनाउन मद्दत गर्छ।
यसका लागि तपाईँले टुथब्रश र कोइला लिनुपर्ने हुन्छ । पहिला ब्रसलाई धाराको पानीमा भिजाउनुस् । त्यसपछि कोइलाको धूलो ब्रसमा राख्नुस् । अब दाँत घोट्न थाल्नुस्। सामान्य तरिकाले गोलो गोलो घुमाउनुस्।
दाँतको भित्री र बाहिरी दुवै भाग माझ्नुस्। सुरुमा अलिअलि कस्तो कस्तो लागे पनि सहनुस् । तपाईँलाई झ्याउ लाग्यो भने सामान्य कोइलामाथि टुथपेस्ट दल्नुस् ।
दाँत किन किराले खान्छ ? यस्तो छ कारण
दाँतको इनामेल रहेको भागमा मात्र किराले खाएर प्वाल परेको खण्डमा धेरै मानिसहरूलाई थाहा हुँदैन । त्योभन्दा अलिकति भित्र गएपछि डेन्टिनमा जान्छ, दाँत किराले खाएको र यसले डेन्टिनसम्म असर गरेको खण्डमा चिसो तातो खाँदा सिरिङ्ग सिरिङ्ग हुन्छ।
त्यति बेलासम्म मानिसहरू मेरो दाँत ठिकै छ कहिलेकाहीँ सिरिङ्ग मात्र त गरेको हो नि भनेर हेलचेक्र्याइँ गर्ने बानी छ।
दाँतको बिचको भाग अर्थात् नशा भएको भागसम्म किराले खान थाल्यो भने मात्र मानिसहरू डेन्टिस्टकोमा उपचारको लागि जाने गर्दछन् । किनभने उक्त बेला दाँत दुख्न थाल्छ। नयाँ पुस्ता बाट सभार
सुतेको समयमा आफ्नो नजिक नराख्नुहोस् यस्ता सामानहरु !!